I-OEM ye-OEM ye-ODM yokuqinisa inkonzo yokwenza ngokwezifiso kunye neFektri | UKUKHULA-Elec
Isishwankathelo soqhagamshelo lwebholiti lolwakhiwo lwesinyithi
I-Bolt eqhagamshela kulwakhiwo lwesinyithi yindlela yoqhagamshelo edibanisa ngaphezulu kweendawo ezimbini zesakhiwo sentsimbi okanye izinto zento enye ngeebholithi. Unxibelelwano lweBolt yeyona ndlela ilula yoqhagamshelo kwicandelo langaphambi kwendibano kunye nofakelo lolwakhiwo.
Ukudityaniswa kweBolled yeyona nto isetyenzisiweyo kufakelo lwesinyithi. Ngasekupheleni kweminyaka yee-1930, uqhagamshelo lwe-bolt lwatshintshwa ngokuthe ngcembe luqhagamshelo lwe-rivet, olwalusetyenziswa kuphela njengenyathelo lokulungisa okwethutyana kwindibano yecandelo. Indlela yokuxhuma yamandla aphezulu ibonakale kwiminyaka yee-1950. Iibholiti amandla High zenziwe ngentsimbi eliphakathi carbon okanye carbon ingxubevange intsimbi, kwaye amandla abo 2 ~ 3 amaxesha ngaphezulu kunoko iibholiti eziqhelekileyo. Unxibelelwano oluphezulu lwe-bolt lunezibonelelo zokwakha ezifanelekileyo, ukhuseleko kunye nokuthembeka. Isetyenziselwe ukwenziwa kunye nokufakwa kwezakhiwo zentsimbi kwezinye izityalo zetsimbi ukusukela nge1960s.
Ingcaciso ye bolts
Ukuchazwa kweBolt esetyenziswa rhoqo kwizakhiwo zentsimbi kubandakanya iM12, M16, M20, M24 kunye neM30. M luphawu lwe-bolt kwaye inani lilo elingu-sangular nominal.
Iibholiti zahlulwe zangamabakala ali-10 ngokwamanqanaba entsebenzo: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 no-12.9. Iibholiti ezingaphezulu kwebanga le-8.8 zenziwe ngentsimbi esezantsi enekhabhoni okanye intsimbi yekhabhoni ephakathi kwaye zibizwa ngokuba ziibholiti ezinamandla amakhulu emva konyango lobushushu (ukucima kunye nokushisa), kunye neebholithi ezingaphantsi kwebanga le-8.8 (ngaphandle kwebakala 8.8, iibholiti eziqhelekileyo ezicokisekileyo zibandakanya ibanga 8.8) kubhekiswa kuzo njengeebholithi eziqhelekileyo. Le tafile ilandelayo ibonisa inqanaba lokusebenza kunye neepropathi zoomatshini beebholithi.
Egqithileyo Inkonzo yokuxhasa zonke iintlobo zokubopha
Okulandelayo: Lonke uthotho ngokwezifiso Screw
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Plate Intwasahlobo, Izahlulo Ihowuliseyili, Ukulahlwa kweMagnesium, Izikrufu, Zonke iiMveliso